Madaxweynaha Puntland oo kulan la yeeshay wefdi ka socda shirkadaha Shiinaha ee Afrika - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo kulan la yeeshay wefdi ka socda shirkadaha Shiinaha ee Afrika
January 15, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweye Deni oo wefdiga Shiinaha kulan kula yeeshay xarunta madaxtooyada, January 15, 2019. [Isha Sawirka: Puntland State House]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha cusub ee Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Talaado ah wefdi ka socda shirkadaha Shiinaha ee Afrika kulan kula yeeshay xarunta madaxtooyada.
Sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay madaxtooyada, kulanka ayaa diirada lagu saaray sidii shirkadaha Shiinaha ay maalgashi uga sameyn lahaayeen gudaha Puntland.
“Midowga shirkadaha Shiinaha ee Africa oo fadhigoodu yahay Ethiopia ayaa madaxweynaha Dowladda Puntland kala hadlay maalgashi ganacsi oo ay doonayaan shirkadahaasi inay Puntland ka sameeyaan, isla’markaasna ay wada-shaqayn wanaagsan oo dhinacyo badan taabanaysa ay ula yeelan lahaayeen Dowladda Puntland.” Ayaa lagu sheegay bayaanka.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Milatariga Mareykanka ayaa sheegay in 13 xubnood oo katirsan ururka Al-Shabaab ay ku dileen duqeyn ka dhacday meel 48 kiilomitir u jirta magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa bayaan [...]